Elgato iyo iHome waxay soo bandhigayaan soo jeedintooda HomeKit | Wararka IPhone
Dareemaha qolka Elgato eve
ka Soosaarayaasha kaabayaashu waxay durbaba bilaabeen inay soo bandhigaan qalabkii ugu horreeyay ee ay soo saari doonaan nidaamka otomatiga guryaha ee Apple. HomeKit waxaa lafilayaa inuu safarkiisa bilaabo maalinta xigta 8, marka shirkadaha sida Elgato o iHome Waxay riixeen xawaaraha isla markaana waxaan awoodi doonaa inaan keydinno aaladaha ugu horeeya ee soo saarayaasha awood u yeelan doonaan inay nala soo baxaan.
Labada soo jeedin (afar ka mid ah arrinta Elgato) waxay muujinayaan in otomaatiga guriga uu leeyahay mustaqbal weyn. Waa run inaysan dhowaan dhaqaalayn, laakiin mustaqbalka waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ka xakameynno ficil ahaan gurigeenna oo dhan saacadda, taleefanka gacanta ama malaha makarafoonno la dhigo qol kasta (Waxaan qiyaasayaa mustaqbal guud, kama hadlayo oo keliya ku saabsan Apple)
1 Habeenkii Elgato
Elgato waxay soo jeedinaysaa aalado dhowr ah. qolka habeenkii u adeegta la soco tayada hawada, heerkulka y qoyaan. Cabbiraadaha waxaa lagu sameeyaa iyadoo la falanqeynayo isku-dhafka isku-dhafan ee dabiiciga ah (VOCs). cimilada habeenki waxay diiradda saartaa banaanka heerkulka iyo cadaadiska. albaabka & daaqada habeenka ayaa noo ogolaan doonta inaan hubino in albaabada iyo / ama daaqaduhu furanyihiin ama ay xiran yihiin waxayna bixin doontaa tirakoobka waqtiga iyo mudada. Ugu dambeyn, Eve tamar ayaa noo sheegi doonta inta tamarta ay isticmaalayaan qalabkeenu. Dhammaan dareemayaasha waxaa lagu xakameyn karaa barnaamijka Elgato ama 'HomeKit' iyadoo la adeegsanayo Siri.
Dhamaan aaladaha habeenka waxaa hada loo heli karaa boos si loo sii qabsado boggooda waxayna imaan doonaan Apple Store laga bilaabo July. Qiimaha qalabka waa sida soo socota:
qolka habeenkii: 79.95 €
cimilada habeenki: 49.95 €
albaabka & daaqada: 39.95 €
tamarta habeenka: 49.95 €
Macluumaad dheeraad ah ee ku jira Websaydhka Elgato eve
IHome iSP5 SmartPlug adabtarada
Hindisaha iHome wuxuu umuuqdaa mid aad ufudud. Asal ahaan waa qalab ah oo aan ku dhejin karno meel kasta oo laga baxo si aan u daarno oo u demino qalab kasta. Tusaale ahaan, haddii aan ka baxeyno guriga oo aan xusuusanno inaan ilownay daminta nalka, waxaan weydiisaneynaa Siri oo SmartPlug + HomeKit ayaa sameyn doonta inta hartay. Sida aan u arko, iSP5 SmartPlug ayaa waxtar leh ku imaan kara haddii aan guriga ku haysanno qaboojiye. Waxaan hawlgelin karnaa qaboojiyaha 10 daqiiqo ka hor intaanan imaan guriga waxaanna gurigeenna kulayl ahaan lahayn xilliga qaboobaha oo aan qaboobi lahayn xilliga kulaylaha.
ISP5 SmartPlug ayaa la hayn karaa laga bilaabo Juun 15.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Elgato iyo iHome waxay soo bandhigayaan soo jeedintoodii ugu horeysay ee HomeKit
HomeKit: dhammaan jawaabaha su'aalahaaga waxaad u baahan tahay inaad ogaato